Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » abantu » Iihotele zeLotte kunye neeResorts Amagama kwi-CEO eNtsha yaseMelika
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
UJim Petrus obizwa ngokuba yi-CEO yeLotte Hotels & Resorts America
I-Lotte iceba ukuvula ngaphezulu kweehotele ezingama-20 kule minyaka mi-5 izayo, ijolise kwizixeko eziphambili zamasango, amaziko obuchwephesha kunye neendawo zokufikela eMelika.
UJim Petrus uyinkokheli yeminyaka engama-30 kunye nonyaka oye wabamba iindima eziphezulu kwiiBlackstone / BRE Iihotele kunye neehotele, iihotele zeStarwood kunye nee Resorts kunye neeHyatt.
ILotte okwangoku ineepropathi ezingama-34 zizonke ngamagumbi ayi-11,200 anezakhiwo ezongeziweyo ezi-3 kumbhobho.
Ukuqeshwa kukaPetrus kwakhela phezu kokuzinikela kophawu loMzantsi Korea ekudaleni amava awodwa anyanzelayo kwiindwendwe zaseMelika.
ILotte Hotels Corporation ubhengeze namhlanje ukuba uJim Petrus uqeshwe njengeGosa eliyiNtloko lesiGqeba sokuLawula iiLotte neehotele zaseMelika, ezisebenza ngokukhawuleza. UPetrus yinkokheli yeminyaka engama-30 kunye nonyaka oye wabamba iindima eziphezulu kwiiBlackstone / BRE Iihotele kunye neeRadio, iihotele zeStarwood kunye neeResort neeHyatt. Ukuqeshwa kukaPetrus kwakhela phezu kokuzinikela kophawu loMzantsi Korea ekudaleni amava awodwa anyanzelayo kwiindwendwe zaseMelika.
Iihotele kunye neehotele zeLotte ungene kwimakethi yaseNyakatho Melika ngo-2015 ngokufunyanwa kwehotele yaseManhattan iLotte New York Palace ehotele kwaye wandisa umqondiso wayo ngo-2020 ngokuvulwa kweLotte Hotel Seattle. I-Lotte iceba ukuvula ngaphezulu kweehotele ezingama-20 kule minyaka mi-5 izayo, ijolise kwizixeko eziphambili zamasango, amaziko obuchwephesha kunye neendawo zokufikela eMelika. ILotte okwangoku ineepropathi ezingama-34 zizonke ngamagumbi ayi-11,200 anezakhiwo ezongeziweyo ezi-3 kumbhobho. Iimpawu zeLotte zehotele zibandakanya uSigniel, uphawu lwenkwenkwezi ezi-6; I-L7, uhlobo lwabo lokuphila; neeLotte Hotels, uphawu lwabo lokutyikitya.
“Kuwo wonke umsebenzi obalaseleyo kaPetrus, waba negalelo ekwakheni ezona nkcubeko kunye nesicwangciso-qhinga seshishini kuzo zonke iimveliso azichukumisileyo. Sinethemba elikhulu kuyo yonke into uJim anokuyinikela kwiiLotte Hotels & Resorts kwaye kuyasivuyisa ukumngenisa kwisizukulwana esilandelayo sempumelelo yohlobo lwaseMelika, utshilo uMnu David Kim, uMongameli weLotte Hotel Corporation kunye ne-CEO. "Uyaliqonda ishishini lethu, inkampani yethu nabantu bethu, kwaye ndiqinisekile ukuba uyinkokheli efanelekileyo yokuqhubela phambili inkcubeko kunye neshishini lethu phambili."
Phambi kokujoyina iiLotte neehotele, uLette wayekunye neBlackstone / BRE Iihotele kunye neeResort apho wayenguSekela Mongameli oMkhulu woLawulo lweeAseti- iiHawaii neehotele. UPetrus ukwabambe iindima eziphambili ngeeStarwood Hotels kunye neeRestihu ngaphakathi kweSt. Regis brand kubandakanya neNkokeli yeBrand yeGlobal kunye neSekela Mongameli wezoSebenzi. Ngaphambi koko, wayebambe izikhundla eziphezulu kwinqanaba leHyatt. Kuwo wonke amakhondo akhe obomi, uPetrus ukwabambe iindima ezininzi zobunkokeli kwezoluntu nakwicandelo. UPetrus uphumelele kwisikolo sehotele kwiYunivesithi yaseMichigan State.
"Ndiziva ndiwongekile ngokunikwa ithuba lokuba ndikhokele indawo yeLotte Hotels & Resorts eMelika," utshilo uMnu Petrus. “Ndibona izinto ezininzi ezinokubakho kwiimveliso zeLotte Hotel, kwaye kuyandivuyisa ukuba nethuba lokwazisa ngezi mpawu kuzo zombini iimarike zodidi kunye nendlela yokuphila kubomi bale ndawo. Ngenkxaso yeqela lethu elikhethekileyo eKorea, ndiqinisekile ukuba sizakuqhubekeka nesicwangciso sokwandisa esele sinaso ngoku, ngelixa sisakha inkcubeko yokubuka iindwendwe kwaye sinikezela ngamathuba amatsha okukhula kwamalungu eqela lethu, iindwendwe kunye nabatyali mali. ”